Col. Felix Kulayige : "Ciidamadeenu guul bay ka gaareen dagaalada ay Al-Shabab kula jiraan Jawhar qabsashadeeda sugida amaanka Soomaaliya ayay bilaw u noqonaysaa"
Col. Felix Kulayige : "Ciidamadeenu guul bay ka gaareen dagaalada ay Al-Shabab kula jiraan Jawhar qabsashadeeda sugida amaanka Soomaaliya ayay bilaw u noqonaysaa" Mogadishu Isniin 10 December 2012 SMC
Col. Felix Kulayige : "Ciidamadeenu guul bay ka gaareen dagaalada ay Al-Shabab kula jiraan Jawhar qabsashadeeda sugida amaanka Soomaaliya ayay bilaw u noqonaysaa" Taliska ciidamada Uganda ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay qabashadii ay ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM ku qabsadeen magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Afhayeenka guud ee ciidamada Uganda Col. Felix Kulayige ayaa sheegay in qabashada magaalada Jawhar ay wadaa u xaareyso nabadeynta soomaaliya.
Col. Felix Kulayige waxaa uu sheegay in ciidamada Uganda ee qeybta ka ah kuwa AMISOM ay dooir wanaagsan ka qaateen hawlgalka ay ciidamadu ku gaareen magaalada Jawhar iyo deegaanada kale ee u dhaw dhaw oo Sh/dhexe ka tirsan.
"Ciidamadeenu guul bay ka gaareen dagaalada ay Al-Shabab kula jiraan Jawhar qabsashadeeda sugida amaanka Soomaaliya ayay bilaw u noqonaysaa" ayuu yiri Col. Felix Kulayige
Sidoo kale Henry Obbo oo afhayeen u ah ciidamada Uganda ee Soomaaliya jooga ayaa asna sheegay in galintaanka Jawhar ay muddo ka baara dagayeen ugu dambeyna ka gun gaareen sida uu yiri waxaana uu intaa ku daray in dadka Jawhar degen ay soo dhaweeyeen.
Taliyaha ciidamada AMISOM Gen Andre Gutti ayaa tilmaamay in ciidamadooda aysan ku ekaan doonin oo ay isku xiri doonaan Sh/dhexe iyo Hiiraan.
Inay ka taxadarayaan khasaaro gaara dadka rayid ah ayuu sheegay taliyaha AMISOM waxaana uu ugu baaqay dadka Jawhar degen inay is dajiyaan oo ay ciidamada la shaqeeyaan. Web Updating, Somaliweyn Website